Edluliselwe Magnetic Latching
Power Ukubalisa High
Solid State Ukubalisa
Electrical kWh Meter lokuziKhethela
NCR yasekwa ngo-2003, njengomnye eziphambili abenzi relay e China kunye ezingaphezu kwama-600 abasebenzi. Thina somusa ngokutyala izixhobo imveliso eziphambili kunye nobuchwepheshe ehlabathini lonke. Imveliso yonyaka iziqwenga ezingaphezu kwe-100 lezigidi.
Uluhlu Product iquka electromagnetic Ipakethi, Latching Ipakethi, Ipakethi Socket, Solid State Ipakethi, Power semiconductor Imodyuli kunye neBhulorho Rectifier njl
Phantsi ISO9001: 2000, ISO14001: 2004 & loMxokelelwano yoBulunga OHSASA18001, thina wafumana CCC, CQC, CE, ul & TUV imvume kwaye RoHS isiqinisekiso imithetho. Ngokusekelwe quality oluthembekileyo, kwakunye inkonzo ebalaseleyo umxhasi, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kulo lonke izwekazi China kunye ehlabathini lonke.
Ukuphumeza uphuhliso oluzinzileyo kurhwebo lwehlabathi, siya kugxininisa engqondweni yolawulo "Ingqibelelo & ukongama", ukuba anike aziwayo, ephakeme inkonzo emva kokuba-ukuthengiswa on-ixesha delivery ukukhawulelana nemfuno bonke abathengi ehlabathini lonke.